Red Hat Openshift 4: Kujekesazve Enterprise Kubernetes Kuburikidza Yakazara Stack Automation | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi unouya tichava tawanikwa Red Hat OpenShift 4, yazvino vhezheni yeiyo yakazara yakazara Kubernetes bhizinesi chikuva. Red Hat ndiye mutungamiri wepasirese mune yakavhurika sosi mhinduro kune bhizinesi renyika uye humbowo hweichi chiitiko ichi. Iyo nyowani vhezheni inoratidza kudzoreredza kugadzirisa iyo yakaoma yechokwadi yecontinu orchestration mune yekugadzira masisitimu. Iyo yakagadzirirwa kuburitsa iyo segore-senge chiitiko pane iyo yakasanganiswa gore kuburikidza ne otomatiki inogadziridza kune ese Kubernetes deployments.
OpenShift inopa hukuru hwakachinjika kune vanogadzira uye nerutsigiro rwe Kubernetes Vashandisi kuti vazvimisike sehwaro hwakachengeteka uye hwusingachinjiki hwemazuva ano uye arikubuda gore -zvizhinji zvebasa. Iyo yatove kushandiswa nemasangano anopfuura chiuru pasirese uye mune dzakawanda zvikamu zvakasiyana, makambani senge Santander, Kohl's, BP, Deutsche Bank, Emirates NBD, HCA Healthcare, nezvimwe.
1 Kurerutsa uye otomatiki kwese kwese:
2 Yakagamuchirwa Bhizinesi Kubernetes:
3 Kupa simba vanogadzira kuti vagadzire:
Kurerutsa uye otomatiki kwese kwese:
OpenShift 4 icharerutsa hybrid uye multicloud deployments (Sekureva kweIDC, na2020, anopfuura makumi mapfumbamwe muzana emasangano achange aine zano rakawanda munzvimbo) kukurumidza nzira iyo masangano eIT anotumira matsva, achibatsira makambani kubudirira uye kusiyanisa mumusika uri kuramba uchikwikwidza. Uku kurerutsa uye otomatiki zvine zvimwe zvakakosha mapoinzi:
Kuzvibata-wega chikuva cheiyo yakasanganiswa gore kupa ruzivo rwakaita segore kuburikidza nesoftware otomatiki uye manejimendi manejimendi kwese kwese gore rakasanganiswa, Inofambiswa neRed Hat Enterprise Linux uye Red Hat Enterprise Linux CoreOS trust foundation. Izvi zvinobvumira kuwedzera kwekuchengeteka, kuongororwa, kudzokorora, kurerukirwa kwemaneja, uye ruzivo rwevashandisi.
Heterogeneous kuchinjika uye kutsigirwa, inowanikwa mumwedzi iri kuuya pane makuru veruzhinji vanopa gore, kusanganisira Alibaba, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, yakavanzika makore matekinoroji senge OpenStack, virtualization mapuratifomu uye asina-simbi maseva.
Iyo yakagadziriswa yakazara stack kuisirwa ine otomatiki maitiro ayo anofambisa kukurumidza kuitiswa kweKubernetes kune bhizinesi.
Yakareruka kunyorera deployments uye lifecycle manejimendi pamwe neKubernetes Operators. Red Hat yave ichipayona yakaoma, inoratidzira kunyorera paKubernetes nevashandisi vanoita otomatiki kunyorera kwekushandisa, kuyera, uye failover. OpenShift 4 ikozvino inopa Red Hat OpenShift Certified Operators. Kushanda pamwe chete nehupamhi hwehukama hwehukama, OpenShift 4 inosanganisira seti yakawandisa yezvishandiso yekumhanya se-se-sevhisi kuburikidza neyakauchikwa gore.
Yakagamuchirwa Bhizinesi Kubernetes:
Red Hat OpenShift Container Platform yakasimbiswa, Kubernetes inoenderana, uye yakasimbiswa neCloud Native Computing Foundation (CNCF). Ndiyo yega Kubernetes bhizinesi rinopa rakavakirwa pamusana we inotungamira yepasi rose bhizinesi Linux chikuva, inotsigirwa nehunyanzvi hweRed Hat hwakavhurika sosi, inotsigirwa ecosystem, uye hutungamiriri. Semutungamiriri anotungamira kunharaunda yeKubernetes, Red Hat inogadziridza Kubernetes yeBhizinesi paOpenShift 4, ichipa hwaro hwakasimba uye hwakachengeteka hwekodhi, ichichengetedza hutsva hwakakosha kubva kunharaunda dzinobva.
Kupa yakachinjika yekuendesa tsoka apo uchichengetedza zvirinani kuchengetedzeka uye kugadzikana, OpenShift 4 inosvitsa Red Hat Bhizinesi Linux CoreOS, iyo OpenShift-yakatarwa yakamisikidzwa musiyano weRed Hat Enterprise Linux. Red Hat Enterprise Linux CoreOS inopa dzakasiyana siyana sarudzo kumabhizimusi mukutumira bhizinesi-giredhi Kubernetes, ichipa isingaremi, isingachinjiki zvizere, uye mudziyo-wakagadziriswa Linux OS kugovera. Mune izvi zvakasiyana, zvidziviriro uye kugadzikana zvinoramba zviri pamberi, zviine otomatiki zvigadziriso zvinotarisirwa neKubernetes uye zvinogoneswa neOpenShift pakushinya bhatani. Izvi zvinobatsira kudzikisa kugadzirisa uye kugadzirisa kugadzirwa kwebhizinesi.
OpenShift 4 inotsigirwa neRed Hat yekupa mubairo-kuhwina tekinoroji rutsigiro uye yakakura mabasa ehunyanzvi, kusanganisira Red Hat Consulting. Iine hunyanzvi hwayo yehunyanzvi uye zano rehunyanzvi uye ongororo, Red Hat inobatsira masangano eIT kugadzira mhinduro dzinosangana nezvinodiwa zvazvino uye zvenguva yemberi.
Kupa simba vanogadzira kuti vagadzire:
Kukura kwekushandisa kwakakosha kumasangano mazhinji eIT, achipihwa basa rayo mukuchinjisa shanduko yedigital. OpenShift 4 inotsigira izvo zvichichinja zvinodiwa zvekuvandudza kunyorera senzvimbo inowirirana yekugadzirisa kugadzirwa kwevagadziri ne:
Automation, kunyorera uye kuzvishandira-sevhisi masevhisi kubatsira vanogadzira kukwirisa mashandiro avo nekupa pane-zvinoda masevhisi ekushandisa uye nekupa otomatiki kune inotakura-yakatsigirwa containerized application application uye kutumirwa.
Red Hat CodeRakagadzirira Nzvimbo dzeBasa gonesa vanogadzira kuti vashandise simba remidziyo neKubernetes, ivo vachishanda pamwe neyakajairika inosanganiswa nharaunda yekuvandudza (IDE) maturusi ayo avanoshandisa zuva rega rega. CodeReady Nzvimbo dzebasa dzinowirirana, dzinobatirana, uye dzakachengeteka kupfuura kana uchimhanyisa midziyo kana chaiwo michina (VMs) palaptop. Izvi zvinosanganisira maturusi uye kutsamira kunodiwa kukodhi, kuvaka, kuyedza, kumhanya, uye kugadzirisa zvikumbiro zvine muwebhu-based IDE.
OpenShift Service Mesh, iyo inosanganisa mapurojekiti eIstio, Jaeger, neKiali seyimwe chete kugona kunovhara pfungwa yekutaurirana yemacroservices-based based application mavakirwo, kusunungura matimu ekuvandudza kuti atarise pane bhizinesi-wedzera pfungwa.
Knative kugadzira serverless application muKutangisa Kwekutanga, zvichiita Kubernetes chikuva chakanakira chekuvandudza, kuendesa, uye kugadzirisa isina server kana basa-se-se-sevhisi (FaaS) mitoro yebasa. Knative maficha anosanganisira kuyera-kusvika-zero, autoscaling, mu-sango kusimudzira, uye maficha masisitimu ekuvandudza makore-echinyakare manyorerwo paKubernetes. Iyo inobvumira vanogadzira kuti vatarise pakunyora kodhi nekuvanza zvikamu zvakaoma zvebudiriro, kuendesa uye kugadzirisa kwavo kunyorera.
KEDA (Kubernetes-yakavakirwa chiitiko-chinotungamirwa autoscaling), kubatana pakati peMicrosoft neRed Hat inotsigira iyo serverless chiitiko-chinotungamirwa mudziyo kuisirwa paKubernetes, ichigonesa Azure Mabasa muOpenShift, muKutangisa Kwekutanga. Izvi zvinogonesa kukurumidza kusimudzira kwevasina server uye zviitiko zvinofambiswa-zviitiko mune yakasanganiswa gore uye pane-nzvimbo kuiswa neRed Hat OpenShift.
Inoshanda-Inogoneswa Maitiro Ekushandisa pane OpenShift neRed Hat Middleware, ichipa simba reOpenShift Certified Operator kune akakosha ekubatanidza matekinoroji uye maitiro otomatiki. Izvi zvinogonesa masangano eIT kuti abatanidze mamiriro avo ekuvandudza kutenderedza kugona kwevashandisi, zvichiita kuti zvive nyore kune vanogadzira kuti vatarise chete pakununura masevhisi-anotevera masevhisi nemaapplication vasina kunetseka nezvekuvandudza kana kuchengetedza maturusi.
Red Hat OpenShift Container Kuchengetedza 4 Yakagoneswa kune Vatakuri, izvozvi zviri kusimukira. Iyo inopa yakanyanya scalable inoramba ichichengeterwa yegore-yemuno kunyorera izvo zvinoda maficha senge encryption, kudzokorora, uye kuwanikwa kune iyo yakasanganiswa gore. Zvikwata zvekushandisa zvinokwanisa kupa zvine mutsindo mavhoriyamu anoramba aripo emhando dzakasiyana siyana dzekutakura, kusanganisira SQL / NoSQL dhatabhesi, mapaipi eCI / CD, uye AI / ML.
Red Hat inoramba ichikura uye isingamisike ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Red Hat Openshift 4: Kujekesazve Enterprise Kubernetes Uchishandisa Yakazara Stack Automation
Izvo Microsoft inoziva nezvedu patinoshandisa Hofisi
Google inotangisa portal chikumbiro chekutsiva iframe